Nooca ugu horreeya ee xasilloon ee Trident OS oo ku saleysan Void Linux diyaar | Laga soo bilaabo Linux
Ku tax liistada ugu horreysa ee xasilloonida 'Trident OS' oo ku saleysan 'Void Linux'
Bishii Oktoobar ee sanadkii hore waxaan halkaan ku wadaageynaa barta go'aanka warka ku saabsan go'aanka ay gaareen horumariyeyaasha Trident OS si ay uga haajiraan BSD una gaaraan Linux Sababtoo ah aragtidiisa waxaa jira xoogaa iswaafajin la'aanta qalabka, taageerada, marka lagu daro awood la'aanta in laga takhaluso dhibaatooyinka qaarkood ee xaddidaya dadka isticmaala qaybinta, taageerada heerarka isgaarsiinta casriga ah iyo helitaanka xirmooyinka.
Goor dambe bilawgii sanadka, waan wadaagnaa warka sii deynta nooca beta ee Trident OS oo leh Linux Kernel, kaas oo ay horumariyeyaasha 'Trident' uga soo guureen BSD una gudbeen Linux iyagoo ku saleynaya qeybinta 'Void Linux'.
Hada bil kadib laga soo bilaabo nooca beta Soosaarayaasha Trident waxay sii daayeen warka sii deynta nooca xasiloon ee Triden 20.02 taas oo lagu soo bandhigayo shaqadii ugu dambeysay ee wareejinta FreeBSD iyo TrueOS salka xirmada Void Linux.
Liis garee nooca beta ugu horreeya ee Trident OS adoo adeegsanaya Linux Kernel
Labada beta iyo nooca xasilloon labaduba waxay adeegsadaan ZFS on xijaabka asalka leh awood u leh inuu dib ugu laabto deegaanka bootka adoo adeegsanaya sawir qaadashada ZFS.
Adeegsade kasta, xog gaar ah oo loo yaqaan 'ZFS dataset' ayaa loo sameeyay galka guriga (waad isdabamarin kartaa isla markaaba shaashadda cinwaanka guriga adigoon helin mudnaanta aasaasiga ah), sirta xogta waxaa lagu bixiyaa tusaha isticmaalaha
Soosaarayaasha 'Trident OS' waxay ka guuri doonaan nidaamka BSD illaa Linux
Taas ka sokow waxay ka shaqeyn kartaa nidaamyada leh EFI iyo BIOS. Kala wareejinta qaybinta isweydaarsiga ayaa la taageeray oo la soo uruuriyay taageerada xirmada waxaa loo bixiyaa labada maktabad ee glibc iyo musl (waad isticmaali kartaa glibc ama musl inaad kala doorato).
Rakiibuhu wuxuu bixiyaa afar heer oo rakibid ah, kuwaas oo ku kala duwan noocyada xirmooyinka la soo jeediyey:
Madhan: xirmo aasaasi ah baakadaha Void oo lagu daray xirmooyin loogu talagalay waafaqsanaanta ZFS.
Server: baakadaha si ay ugu shaqeeyaan qaab konsole ah iyo adeegyo dheeri ah oo loogu talagalay server-yada (firewall, cron, autofs, wireguard, iwm).
Desktop Lite: desktop yar oo ku saleysan desktop-ka Lumina.
Desktop Buuxa: desktop dhameystiran oo ku saleysan Lumina oo leh xafiis dheeri ah, isgaarsiin iyo codsiyo warbaahin badan.
U guurista Void Linux, Trident wuxuu damacsan yahay inuu ballaariyo taageerada kaararka sawirada iyo u siiso dadka isticmaala darawallo garaafyo casri ah, iyo sidoo kale wanaajinta taageerada kaararka codka, gudbinta maqalka, ku dar taageerada maqalka iyada oo loo marayo HDMI, kor u qaadida taageerada qalabka isku-xiraha shabakadaha wireless-ka iyo aaladaha Bluetooth, waxay bixiyaan noocyo cusub oo barnaamijyo ah, dardar-geliyaan hawsha kabaha, iyo hirgelinta taageerada qalabyada isku-dhafan ee nidaamka UEFI.
Xulashada Void Linux oo ah salka nidaamka waa sababta oo ah distro waxay u hoggaansameysaa tusaalaha wareegga joogtada ah si loo cusbooneysiiyo noocyada softiweerka (cusbooneysiin isdaba-joog ah, oo aan lahayn noocyo kala duwan oo loo qaybiyo).
Mashruucu wuxuu adeegsadaa maareeyaha nidaamka socodka si loo bilaabo loona maamulo adeegyada, wuxuu adeegsadaa maareeyaha xirmada xbps iyo nidaamka isku xirnaanta xirmooyinka xbps-src. Meeshii Glibc, Musl waxaa loo isticmaalaa maktabada caadiga ah iyo LibreSSL halkii laga isticmaali lahaa OpenSSL.
1 Soodejiso Trident 20.02
1.1 Ka cusbooneysii beta illaa nooc deggan
Soodejiso Trident 20.02
Kuwa xiiseynaya tijaabinta shaqada ay soosaarayaasha Trident ku sameeyeen u guuritaanka nidaamkooda Linux, Waxaad kala soo bixi kartaa sawirka qaabka deggan degelkeeda rasmiga ah.
Si aad u duubto sawirka, waxaad ku sameyn kartaa Etcher oo ah aalad qaabeyn badan leh.
Ka cusbooneysii beta illaa nooc deggan
Hadda kuwa soo dejiyey nooca beta wayna ku nagaadeen, waxay cusbooneysiin karaan nooca xasilloonida iyaga oo aan dib u rakibin nidaamka.
Arrintan awgeed waa inay awood u yeeshaan bakhaarka mashruuca Trident iyadoo amarka soo socda:
cd /etc/xbps.d && wget https://project-trident.org/repo/conf/trident.conf
Kadibna waa inay ku habeeyaan rukhsadaha:
chmod 644 /etc/xbps.d/trident.conf
Ku keydi bakhaarka:
Waxaa la weydiin doonaa inay doonayaan inay aqbalaan / keydiyaan furaha guud ee keydka Mashruuca Trident. Kaliya ku qor "y" oo ku dhufo gala si aad furaha u keydiso.
Tan ayaa hadda la sameeyay waxaan ku sameyn doonnaa cusbooneysiinta adiga oo garaacaya mid ka mid ah amarradan soo socda:
xbps-install -S trident-core
Taas oo kaliya rakibi doonta nidaamka aasaasiga ah waana tan xulashada lagu taliyay ee loogu talagalay dadka isticmaala khibrada leh ama kuwa doorbidaya inay u dhisaan nidaamka dookhooda.
Halka kuwa doorbidaya inaanay wax isku murgin, waxay ku rakibi karaan nidaamka dhameystiran amarka soo socda:
xbps-install -S trident-desktop
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Ku tax liistada ugu horreysa ee xasilloonida 'Trident OS' oo ku saleysan 'Void Linux'
Maxay soo kordhinaysaa marka la barbar dhigo noocyada rasmiga ah ee VOID? Maxaa yeelay wax kasta oo Lumina ...
MystiQ Video Beddelaha: Beddelaha qaabdhismeedka badan ee qaabdhismeedka fudud
Ku qor liistada cusub ee PeerTube 2.1 oo leh is-dhexgal hagaagsan iyo xulashooyin